Ihe eji eme ala nke kacha mma, ihe eji eme ala ọhụụ, uru na ọghọm dị n'ime ụdị ala ahụ - Ọkachamara ZD Floor
Ọkachamara ZD Floor
Nchịkọta usoro eji eme ihe ọkụkụ nke SPC
Ngwakọta nke ala PVC Ngwakọta PVC resin ntụ ntụ, ntụ ntụ, plasticizer, stabilizer, carbon ojii, ihe ndị bụ isi bụ polyvinyl chloride na ntụ ntụ nkume. Ejiri akwụkwọ plastik mee mpempe akwụkwọ PVC na-...
Nkpukpo ala nke ulo elu nke oche ulo elu nke oche igwe oche
Kedu ihe ala SPC? O bu udiri ihe eji aru eji aru aru ohuru ewu ewu na Europe na America, nke nano-molecules mere, nke di na gburugburu ya ma ogaghi acho mmanu ma obu nkpo ya iji dozie nsogbu nke form...
Ala egwuregwu PVC
1. Okwu nkasi obi: Enwere ike imebi elu ụlọ egwuregwu PVC ọkachamara nwere ike imebi ya mgbe ọ na-emetụta ya, dị ka matraasi anọchiri nke ikuku nwere n'ime ya. Egwuregwu mmerụ ahụ. 2.Nsogbu banyere ị...
Ọdịiche dị n'etiti ala plastik na ala osisi siri ike
Ebe egwuregwu na-agụnye ụlọ ikpe basketball, ụlọ ikpe badminton, ụlọ ikpe egwuregwu volleyball, ụlọ ịgba egwu tebụl, egwuregwu gyms, wdg, nke na-ezo aka na ụlọ ikpe egwuregwu dị n'ime. Ala ndị a dọba...
Ndị na-ere ngwaahịa KINGUP
Meziwanye ọkwa ngosipụta ngwaahịa na ahụmịhe ejiji, yana nso ahịa chọrọ. Enweela “China Top 30 Integrated Wall Building Materials Industry”, “China Green Products” na nsọpụrụ ndị ọzọ! KINGUP bu onye ...
Etu ịhọrọ LVT, SPC, WPC
N’ahịa ala taa, ndị a kacha mara amara bụ LVT flooring, SPC flooring, na WPC.Were ihe ị maara gbasara ha? Ka anyị buru ụzọ kwuo maka ihe bụ ala LVT, SPC, na WPC? Ọ bụrụ n’ịchọrọ ime ka ihe LVT, SPC,...
Nhazi nke ala
N'oge ugbu a, ịtọ ala abụrụla nhọrọ kachasị mma maka ịchọ ụlọ ọ bụla mma, mana ụdị sọlfụ dị iche iche dị n'ahịa ahụ na-adọrọ adọrọ. A ga-ekebi ụdị nke ịme ụlọ nwere ike ịbụ ihe eji akpụ osisi, ihe ej...
KINGUP SPC onye rụrụ ala
KINGUP bụ ụlọ ọrụ na-emepụta ala nke na-ejikọta R&D, imewe, mmepụta, ahịa, ntinye na ọrụ aka nke ala SPC na ala PVC. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso asọpụrụ nke "ịdị mma mbụ, iguzosi ike n'ezi i...
Gịnị ka ị ga-eme ma ọ bụrụ na ala nkụ bụ ebu?
Nke mbu, kedu ndi eji eme otutu ahihia nke ahihia. Jiri mmanụ dị ọcha dị 1: 3 belata ọkụ ahụ, mesịa, jiri akwa dị nro kpochaa ya attentiona ntị na ịchafụ ọcha ahụ ekwesịghị ịdị oke. Ọ bụrụ na mildew ...
Ihe eji ewu ulo nke SPC bu ihe eji eme ulo, ihe ndi eji eji osisi eme adighi ya nsogbu
Ahịhịa osisi bụ ihe mbụ mmadụ na-eche maka ya, n’ihi na a na-enweta ya na ihe siri ike dị elu, osisi dị mma, agba na-ekpokwa ọkụ. Ire. Agbanyeghị, enwere nsogbu ndị a na-apụghị ịgbagha agbagha na iji...
Kedu ihe dị iche n'etiti ala WPC na PVC?
WPC na-ezo aka na ebe eji osisi plastik osisi mee, osisi plastik osisi. PVC bụ polyvinyl chloride plastic, na ala PVC nke ala nwere ike ọ gaghị agbakwunye ntụ ọka. Ntinye na nrụnye: WPC wụnye ala dị ...
Etu esi eme ala
1. Anyi buru uzo kpopu ahihia ma kpochapu unyi na unyi.Mgbe ala nke ebe anakpo ahihia kporo nku, were nwayọ kufu mmanu n’ime ala di ka ogha ma kpachara anya. Ọ nwere ike na-arụ ọrụ nke ọma. 2. Jiri ...
Otu esi agba ala
E nwere ụdị eserese n'ala abụọ: otu bụ ụcha okike, nke ọzọ bụ ụcha. Colorcha sitere n'okike bụ na ọ naghị arụ ọrụ ọgwụgwọ ọ bụla na nhazi, ma na-anọchite anya steeti mbụ ahụ. Enwere ụdị agba agba abụ...
Etu esi edozi ulo ahihia plastik
Ala plastik nwere uru nke ịbụ onodu akụ na ụba, ụcha, ihe na-egbu egbu, enweghị nhịahụ, na-anabata ụda, ma nwee ahụ iru ala. 1. Wepu ụdị unyi niile dị na ala n'oge na mgbakwunye na iwedalata ala, wụs...
Ihe ị ga-eme ma ọ bụrụ na ala ahụ dara
Ndụmọdụ maka ndozi ịgba ụlọ: 1. Etuchaala elu agba ahụ agbajie ma rụkwaa ya, obere mgbawa na-apụta n’elu ala agba ahụ. A na-akụri ihe nkiri eserese n'ihi na ala na-ekpughere ìhè anyanwụ ma ọ bụ ogolo...
U.S. anaghị atụfu ego tariffs, esemokwu patent arụmụka
N'oge na-adịbeghị anya, United States wepụtara ndepụta nke atọ nke ndepụta nkwụpụ ụgwọ maka tarif, na-ekwupụta na ọ ga-agbachapụ ego ọnụahịa na ngwaahịa ndị dị larịị. Ihe omume abụọ a wepụrụ mgbagha ...
Etu esi edozi bamboo na ala osisi
Jide ikuku ikuku Mainta na-ejide ikuku ikuku mgbe niile nwere ike ịgbanwe ikuku dị n'ụlọ na n'èzí. Karịsịa n'ihe banyere enweghị onye bi ma na-elekọta ogologo oge, ikuku ikuku dị mkpa karịa. Ihe a na...
Gịnị bụ ciment onwe-elu?
Ihe eji eme ciment n’onwe ya bu ihe eji eme ciment, ihe ndi ozo bu ihe eji eme ciment, ihe ndi ozo di nma, ihe ndozi na ihe ndi ozo. Gosi ihe a. Cement onwe-larịị bụ nke kewara n'ime elu ciment-onwe-...
Kedụ ihe m kwesịrị ị paya ntị na mgbe a na-eche ibo ọfịs PVC n'oge oyi?
N'ihi njirimara anụ ahụ nke mgbasawanye ikuku na nsị nke ụlọ ọrụ PVC, ọtụtụ ndị ahịa na-akọ na ala adịghị abụkarị otu mgbe a na-eme ya n'oge oyi. N'ezie, nke a abụghị nnukwu nsogbu Ọ bụrụhaala na ị a...
Otutu isi choro nlebara anya na owuwu ulo PVC oyi
Buru ụzọ tụọ ala dị n’ebe owuwu ahụ Ọ bụrụ na ọ dị ala karịa 10 Celsius C, a gaghị arụ ụlọ ọ bụla; awa iri na abụọ tupu mgbe a na-ewu ụlọ, enwere ike ịme ihe iji dobe ọnọdụ ime ụlọ dị elu karịa 10 Ce...
Gini bu ihe eji ewu osisi?
Kedu ihe eji eme ala ulo?
Gini bu njimara nke pvc flooring?
Ebee ka ahihia ulo ahihia na ulo di?
Kedu ụdị mmiri mgbochi mmiri na ala ụlọ gburugburu ebe obibi nke gburugburu ebe obibi?
Kedu ihe ala PVC na otu esi ahọpụta ahihia PVC?
Gịnị bụ ala ọkpọkọ na enwere ọtụtụ ụdị?
Kedu ihe dị iche n’etiti ịkpụcha ahịhịa osisi siri ike na nke ihu akwa atọ
.Lọ　|　Gbasara anyị　|　Nkwupụta nwebisiinka　|　Kpoo anyi　|
Copyright © 2008-2020 ZD Floor ọkachamara Ltd. Ikike niile echekwabara
Ihe eji eme ala nke kacha mma, ihe eji eme ala ọhụụ, uru na ọghọm dị n'ime ụdị ala ahụ